Telefoona Foolii Fuunfatu.
Jawwaalli Kun KAT S61 jedhama. namoota Konistraakshiina ykn Ijaarsa adda addaa keessa hojjataniif qophaahe. Bakka hojiitti akka tasaa yoo keemikaalli adda addaa banamee qilleensatti makamutti jiraate, foolii kemikaalaa fuunfatee Sagalee dhageessisa. kemikaalli qilleensa keessatti makame sun tarii w
Makiinaa Shofeera Malee Deemtu
Amma booda Shofeerri gursaa buleefii shofeerri machaawes yaaddoo takka malee makiinaa oofuuf deema. Konkolaataan kun Self Driving Car jedhama. Self-Driving jechuun makiinaa ofiin of oofu jechu. Shofeerri keessa taa’ee rakkina akka tasaa mudatu horfofuu malee, wanti inni godhu heddus hin jiru. Makiin
Rakkina biyya teenya keeysatti akkaan beekamu keessaa tokko rakkina taaksiiti. Nama hedduu osoo taaksii eeguu sa’aan hojii jala dabra. barataa heddutu sababaa taaksii barumsarraa hafa. Biyyoota Guddatan keessatti tajaajila taaksii teknoolojiin deeggaramutu jira. Tajaajilli akkanaa heddu tahus, kan y
Earphone Afaan Namaa Hiiku
Kaampaaniin Google Earphone Ajaa’ibaa tokko hojjate. Earphone Bluutuuzaan dalagu kun, Afaan 40 hiikuu dandaha. kanaafuu namni Afaan ingiliffaa beeku, nama Afaan chaayinaa malee afaan biroo hin beeyne wajjiin walii galuuf deema jechu. Earphone kun chaarjii elektriikaatiin hojjata. eega yeroo takka ch
Telefoona keenya yoo mana keeysatti bakka keenne dhabne, telefoona nama birootiin itti bilbillee yoo inni yaame barbaannee argina. furtuun yoo dhabame hoo? teknoolojiin haarawa dhufe kun, “amma booda furtuu eessa kaaye jettanii barbaadaa ooluun hafe” jedha. meeshaan kun haalaan xiqqaadha. furtuu irr
Toyotan Bara 2022 Konkolaataa Ajaa’ibaa hojjachuuf deema jedhe.
Makiinaan socho’uudhaaf gaaza barbaada. yeroo dhihoo asitti ammoo, makiinaawwan humna elektriikaatiin hojjatanis oomishamutti jiru. garuu rakkoon makiinaa elektriikaa baatrii isaati. Baatriin Makiinaa Elektriikaa Deep Cycle Battery jedhama. Baatrii chaarjii qusatu jechu afaan namaa galuun. garuu baa
Roobootiin akkamitti Namaan haasawa?
Sa’udiin Addunyaa irratti yeroo jalqabatiif Robootiif lammummaa kennite.Kora Investimentii magaalaa Riyaad keessatti qophaaye irratti Robotiin namaan walii waliigaltu, ummatatti haasayaa oolte. Robootiin Soofiyaa jedhamtee moggafamte tun, kaampaanii Teknolojii Hong Kong kan Hanson Robotics jedhamuu